Akụkọ - Nkọwa Okwu Banyere owlọ Egwuregwu
Coolinglọ elu dị jụụ bụ onye na-ekpo ọkụ ọkụ, n'ime nke ewepụrụ okpomọkụ site na mmiri site na kọntaktị n'etiti mmiri na ikuku. Towlọ elu dị jụụ na-eji evaporation mmiri ajụ okpomọkụ sitere na usoro ndị dị ka ime ka mmiri na-ekesa mmiri a na-eji mmanụ mmanụ, ụlọ ọrụ kemịkal, osisi ike, igwe nchara na ebe a na-edozi nri.
Towerlọ elu mmiri mmiri na-emepụta ihe na-ewepụta okpomọkụ na ikuku ọ bụ ezie na jụrụ oyi nke iyi mmiri na okpomọkụ dị ala. Owlọ elu na-eji usoro a ka a na-akpọ ụlọ elu jụrụ ikuku evaporative. Enwere ike iji ikpo ikuku kpo oku ma obu ikuku mmiri. A na-eji ikuku ikuku ikuku ma ọ bụ mgbasa ikuku na-amanye iji kwado arụmọrụ nke arụmọrụ nke ụlọ elu ahụ yana akụrụngwa eji arụ ọrụ.
A na-akpọ usoro ahụ "evaporative" n'ihi na ọ na-enye ohere ka akụkụ dị nta nke mmiri na-eme ka ọ dị mmiri ka ọ na-asọba n'ikuku ikuku na-agagharị, na-enye nnukwu mmiri dị jụụ na mmiri ndị ọzọ. Okpomọkụ sitere na mmiri mmiri a na-ebuga na ikuku ikuku na-eme ka ikuku ikuku na iru mmiri ya ruo 100%, a na-ahapụkwa ikuku a na ikuku.
Evaporative okpomọkụ jụrụ ngwaọrụ - dị ka ulo oru jụrụ usoro - na-ejikarị na-enye budata ala mmiri okpomọkụ karịa iru na “ikuku-mma” ma ọ bụ “akọrọ” okpomọkụ jụrụ ngwaọrụ, dị ka radiator na ụgbọ ala, si otú enweta ihe ọzọ na-eri-irè na ike ịrụ ọrụ nke usoro mkpa nke jụrụ.
Towlọ elu mmiri na-eme ka mmiri dị iche iche dịgasị iche site na obere ụlọ elu-elu ruo na nnukwu ụlọ hyperboloid (hyperbolic) nke nwere ike ịdị elu ruo 200 mita na 100 mita na dayameta, ma ọ bụ akụkụ akụkụ anọ nwere ike ịdị elu karịa 15 mita na 40 mita ogologo. Obere ụlọ elu (ngwugwu ma ọ bụ modular) na-arụkarị ụlọ ọrụ, ebe a na-ewu ndị buru ibu na saịtị na ihe dị iche iche.